MAXAY U FASHILMEEN URUR DIIMEEDYADA SIYAASADEED? [BAADIGOOB XAQIIQ] (QEYBTII 5AAD) – Codka Dhaqdhaqaaqa Somali secular International
FASHILKA WAHABIYADDA (SALAFIYADDA)
Yeelkadeedee, intaasi waa qeyb kamid ah taariikhda urur diimeedka ‘alwahaabiyyah’ ee raacsan wadadii shiikh Maxamed bin Cabdulwahaab. Haaddaan u imaado su’aasha ah maxay u fashimeen, ee ah cinwaanka dhigaalkaan – waxaan durbadiiba heleenaa jawaabta oo ah mid fudud, taas oo ah in wadaadkaan iyo xertiisaba ey garab mareen xeerarkii Eebe u dajiyay koonkaan iyo abuurka ku hoos nool. Xeerkaas oo ah in la aqbalo dadka kaa diin, dhaqan, af, midab, madhab iyo fikir duwan – xisaabtoodana eysan aheyn shaqo qof aadane ah u taal, ee ey tahay mid Allihii uuntay ey u taal, isageena khusaysa siduu ka yeelayo umadaha kii rumeeyay iyo mid aan rumaynba. Eebe oo arintaan nooga digaya wuxuu Quraanka ku yiri:
“ha eyrin kuwa baryaya eebahood aroor iyo galabba, iyagoo dooni wajigiisa waxba kaama saarna xisaabtooda iyana xisaabtaada wax kama saarna, ood erisid oodna ka mid noqotid daalimiinta” Eebe wuxuu ka digayaa in dadka Muslimiinta ah ee kaa fikir ama darajo ama koox amaba madhab duwan la iska fogeeyo oo la eryo sababo la xiriira in qofku u arko iney ka hooseeyaan dhincyo kala duwan, iskaba daa in moorada laga saaro oo la gaaleysiiyo ama la dilo’e. Eebe wuxuu ku tilmaamayaa qofka sidaas u dhaqma inuu kamid yahay daalimiinta uu Eebe ugu yaboohay ciqaab adag. Kaasi waa kan eryay oo kaliya, ka waran kan gaaleysiiyay oo ku tilmaamay iney yihiin mushrikiin, dhiigoodana daadiyay, sharafkooda duray, maalkoodana dhacay?
1- Qofkii u fiirsada qaabka ey u dhaqmaan xerta wahaabiyadda, wuxuu durbadiiba garannayaa ineysan nolosha adduun u ogoleyn qofkaan iyaga raacsaneyn oo ku socon manhajkooda, iskaba daa qof aan Muslim aheyn warkiisa. Arinkaasna waa arinka uu Eebe (SWT) uu ku dhaleeceeyay dadyowgii naga horeeyay Yuhuudda iyo Kirishtaanka. Eebe wuxuu yiri:
“Yuhuud waxay tiri Nasaara (Kirishtaanka) waxba ma’aha. Nasaarana waxay tiri Yuhuud waxba ma’aha. Iyagoo aqrinaya kitaabka (tooraat iyo injiil) sidaas ayeey yiraahdeen kuwaan waxba garaneyn hadalkooda oo kale, Eebaa kala xukumi maalinta qiyaamaha waxay isku khilaafeen”. Aayaddaan waxaa laga tusaale qaadanayaa inaan qolanna la fiijin oo lagu sheegin iney baadiyeysan yihiin, xukunka iyo kala soocidda abuurkana loo daayo Allihii uuntay sida uu aayadda ku caddeeyayba. Waxaan kaloo aayaddaan ka fahmeynaa in Eebe sheegay iney jiraan dad aan Yuhuud iyo Nasaaro toona aheyn, laakiin u dhaqmaya oo ku hadaaqaya waxay labadaas qolo ku hadaaqi jireen kuna dhaqmi jireen, oo ah in firqo gooniya isku aragto iney kaligeed tahay uun kooxda badbaaday, wixii aan iyaga aheyna ey halaagsamayaan. Allah kuwaas wuxuu ku tilmaamay kuwii aan waxba ogeyn ‘laa yaclamuun’. Haddaan aayaddaan si dhow u eegno waxaan arkeynaa in kooxda wahaabiyadda ey ku dhaqmayaan dhaqanka kaligii saxsanaanta ee Eebe ku eedeeyay iney Yuhuud iyo Nasaaro ku dhaqmi jireen.
2- Si taa lamid ah, nolosha aakhiro waxay ragaan aaminsan yihiin qofkaan manhajkooda ku dhaqmin inuusan kamid aheyn kooxda badbaadaysa ‘al-firqah al-naajiyah’. Arinkaasna waa dhaqan kale oo Eebe uu ku dhaleeceeyay qawmamkii naga horeeyay ee Yuhuud iyo Kirishtaanba lahaa, Eebe wuxuu yiri:
“waxay dhaheen ma galayo jannada ruuxaan Yuhuud ama Kirishtaan aheyn; taasina waa yididiiladooda (beentooda) waxaad dhahdaa keena xujadiina haddaad run sheegaysaan. Ruuxiise wajigiisa u hogaamiya Eebe isagoo sama-fale ah wuxuu ajrigiisa kuleeyahay Alle agtiisa, kuwaasna ma cabsadaan mana walbahaaraan”.
Kitaabka la yiraahdo Al-durur al-sanniyah oo ah dhigaalo ey qoreen culumdii hore ee wahaabiyadda oo uu ku jiro ina Cabdulwahaab mujalladka 14aad waxaa ku qoran; “suurtagal ma aha in qof dadka kamid ah uu ka leexdo manhajkii Aala-shiikh (yacnii Al-wahhabiyah) sababtoo ah manhajkaasu waa wadadii toosneyd – oo qofkii ka leexdaa uu jaxiimo galaayo”.
In ruuxu ku naaloodo in firqadiisa kaliya ey tahay firqada badbaadaysa wax cusub ma’aha, oo Yuhuud iyo Kirishtaan ayaa horay ugu riyooday in kaligood ey jannada galayaan, Eebana (SWT) arinkaas qolooyinkaas waa ka diiday kuwa ka danbeeyaana waa uu uga digay iney waxaas ku naaloodaan. Taa bedelkeeda ilaahey wuxuu rusushiisa uu faray iney dadkooda u sheegaan ineey iyagu uun yihiin digayaal ka digaya ciqaabka Eebe – eysanna aqoon halka laftigoodu ey ku danbeyn doonaan, Eebe wuxuu yiri:
“waxaad dhahdaa ma ihi bidci rasuulada ka gooni ah, mana ogi waxa la igu fali aniga iyo idinka, waxaa uun raaci waxa la ii waxyoodo (oo Qur’aanka ah) mana ihi waxaan ka aheyn u dige cad (oo muuqda). Aayad kale wuxuu Eebe (SWT) ku yiri:
“waxaad dhahdaa cid walba haku shaqeyso jidkeeda, (diinteeda) Eebe ayaa og cidda ugu jid hanuunsan”
Dadka rasuulka (SCW) la farayo inuu sidaan ula hadlo waa gaaladii Mushrikiinta reer Quraysh, ee aan gaalnimadooda ku ekaan kaliya ee rasuulka la dagaalamay oo aad u dhibay. Haddiiba la is faray inaan xataa gaalada xabadka loo garaacin oo sidaas jajabnaanta iyo qadarinta ka muuqdo ula hadla la is faray, hadda xagee joogaa qofkii Muslimka ahaa ee uun fikir la isku khilaafay?
3- Ururka Wahaabiyah waxay in badan ka dhowaajiyaan iney xoogga saarayaan iney umadda ka saxaan caqiidada, laakiin waxaad moodaa marka laga eego hab-dhaqankooda siyaadadeed inuu khilaafsan yahay mabaadi’da asaasiga ah ee towxiidka. Ururka Wahaabiyada ma ey ogola cid ka fikir duwan, bal xaaladaha qaar wey gaaleysiiyaan dadka ka ra’yi duwan. Dhaqankaasna waa dhaqankii tuulooyinka ee Eebe balanqaaday inuu halagayo kahor maalinta qiyaamaha. Sidaasna waxay ka hor-imaanaysa xeerka koowaad ee ilaahey u dajiyay koonka – kaas oo ah; in Alle SWT hayay kaligii, sugan, aan is-bedeleen, amamrkana uu kaligii u sugnaaday. Cid alaale iyo ciddii Alle ka sokeeysaanna yihiin tiro, is-bedelaysa, kala duwan, taladooduna wadaaga. Eebe wuxu yiri:
“tuulo aanan halaageyn ma jirto ama aanan cadaabeyn cadaab darran qiyaamaha kahor, waana arin ku qoran kitaabka (lawxul maxfuudka). Tuulana waa sidaan horay ugu soo qeexnay ee ah; degaan oo ey ku noolyihiin dad isku wada fikir ah oo diiday in dad ka duwan ey ku dhex noolaadaan.
Isku soo wada xooriyoo, seddxdaas arimood ee aan kor kusoo xusnay waa wax ka hor-imaanaya tacliimaadka Quraanka, waxayna kamid yihiin arimihii Yuhuudda iyo Kirishtaanka, iyo dhaqamadii qawmamkii naga horeeyay lagu halaagay ee Alle ku dhaleeceeyay oo ku diiday caqiidadaas faasidka ah. Waana seddexdaan sababood iyo amar ku taagleynta waxa fashiliyay urur diimeedyada guud ahaan, gaar ahaan ururka Al-wahaabiyyah. Sidoo kale dhigaalkaan bilowgiisa waxaan ku sheegnay in Allah balan qaaday inuu halaagayo cid Allaale iyo cidii isku dayda kalitalisnimo oo u dhaqanta sida dhaqankii tuulooyinka halka qolo deganeyd (eeg qoraalka bilowgiisa si aad u fahanto waxaa loola jeedo dhaqanka tuulooyinka). Xiligii tuulooyinku wuu dhamaaday, waxaa lagu jiraa casrigii magaalooyinka, laakiin waxaad moodaa urur diimeedyada iney weli joogaan casrigii tuulooyinka oo eysan kasoo gudbin.
-Suurat Al-Baqarah 113
-Suuarat Al-Baqarah: 111-112
-Al-durarul Sanniyah m14/375
-Suurat al-Axqaaf: 9
-Suurat Al-Israa’: 84
La soco qeybta xigta…
21Mohamed Calaawi, Ibnu Bashir Ali Walash and 19 others